Manontany Ny Indiana: Tena Heloka Tokoa Ve Ny Fitsidihana Ny Habaka Torrent? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2016 7:07 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Ελληνικά, English
Nandràra ireo habaka torrent mielipatrana isan-karazany nandritra ny fotoana maharitra i India – vaovao taloha izany. Saingy eo ambanin'ny politika federaly vaovao ao India, azo gadraina mandritra ny telo taona sy mandoa onitra 300.000 Ropia indiana (~ 4464 dolara Amerikana) ny olona izay tratra mitroka votoaty ao amin'ireo tranonkala nakatona.
Tsy ela taorian'ny niparitahan'ny vaovao momba ny filazana, namoaka didy John Doe ny Fitsarana Avo ao Chennai – iray amin'ireo fitsarana tranainy indrindra ao India mba hanakatona tranonkala marobe hatramin'ny 830, anisan'izany ireo tranonkala torrent marobe tahaka ny thepiratebay.se, torrenthound.com, sy ny kickasstorrents.come.in.
Ny torrent dia anisan'ny rafitra ahafahana mifanolotra tahiry eo amin'ny tsirairay (“P2P”) izay ampiasaina hizarana tahiry sy angona elektronika manerana ny aterineto.
Fantatra amin'ny hoe BitTorrent, ity rafitra fizarana tahiry ity dia iray amin'ireo fenitra ara-teknika mahazatra indrindra amin'ny famindrana tahiry lehibe, tahaka ny tahirim-peo nomerika ahitana fandaharana amin'ny Fahitalavitra na raki-tsary na tahirim-peo nomerika ahitana hira.
Ao anatin'ity rafitra ity, ny tahiry misy soratra fanitarana.torrent dia ahitana metadata (tahiry mpandrakitra tahiry) momba ny rakitra – ohatra anaran-drakitra, ny haben'izy ireo, ny firafitry ny fampirimana ary ny lanja kryptografika ilaina amin'ny fanamarinana azo antoka. Tsy ahitana ny votoaty ho zaraina izy ireo, saingy raha tsy misy azy ireo, dia tsy mandeha ny rafitra. (tao amin'ny Wikipedia)
Namoaka lahatsoratra bilaogy ny vavahadim-baovao teknolojia Indiana Medianama izay miady hevitra fa resaka fitrohana votoaty voajirika avy amin'ireo tranonkala sasany voaràra izany fa tsy fidirana amin'ireo tranonkala ireo izay tokony hitarika any amin'ny olana ara-pitsarana. Toa noho ny haratsin'ny fandrafetan-teny ao amin'ny filazana no miteraka olana. Nosokajian'ny Medianama ho “hafahafa amin'ny fomba fisainana rehetra” izany, ary nanamarika koa izy fa, raha raisina ara-bakiteny, dia tsy mifanaraka amin'ny lalànan'ny Zon'mpamorona Indiana.
Nahitana fiovana maro tao ho ao ny Lalànan'ny Fijirihana Nomerika amin'ny ankapobeny ary ny (fizarana faha-63, 63A sy 65 amin'ny Lalànan ‘ny Zon'ny Mpamorona Indiana tamin'ny taona 1957) tao anatin'ny dimy taona farany nefa dia tsy mbola nampiharina natao hanankery toy izao taloha.
Tsy vao voalohany i India no nametraka fandraràna amin'ny habaka tahaka izany. Tamin'ny Desambra 2014, tranonkala 32 – anisan'izany ny habaka mpampiantrano kaody Github, ny habaka fandefasana lahatsary mivantana Vimeo sy Dailymotion, ny fitehirizana antserasera Internet Archive, ny habaka mpampiantrano rindrambaiko malalaka Sourceforge — no voaràra tao India. Avy eo nosokafana izy ireo tatỳ aoriana rehefa nanaiky hanaisotra ireo votoaty sasany mifandraika amin'ny ISIS.
Tahaka ny tamin'ny lasa, nanomboka nanome sosokevitra fipiratena hanafenana na hanaovana adiresy IP sandoka an'olona iray ny mpiserasera mpahay teknolojia. Sumiteshwar Choudhary, mpisolovava momba ny heloka bevava sy ny fanambadiana namariparitra tao amin'ny Quora mikasika ny nisian'ny lalàna nandritra ny fotoana elaela saingy tsy mba nampihatra izany tanteraka ny governemanta:
Lets arrest people who download #torrents https://t.co/VpSwnZV7lI